Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Brezila » Fitoriana ny vaksinin'ny vaksiny: Nirehitra tamin'ny mariky ny Vaksinin'ny Vaksinin'i Rio's Christ the Redeemer
Ny sarivongan'i Kristy Mpanavotra dia nopetahany takelaka famantarana ny «Vaksinina Mamonjy» sy «United for Vaccines» famantarana.
Ny fampirantiana dia nokarakarain'ny Cristo Redactor Sanctuary sy ny masoivohon'ny dokambarotra Ogilvy Brazil
Ny mpino sasany dia tsy nankasitraka ilay hafatra ka nanameloka azy ho manevateva
I Brezila dia iray amin'ireo firenena tratry ny tsimok'aretina mafy indrindra, miaraka amin'ny fahafatesan'ny 436,000
Tao anatin'ny ezaka natao mba hamporisihana ny olona hanao vaksiny manohitra ny COVID-19, toerana manintona mpizahatany Breziliana malaza manerantany an'i Jesosy Kristy, nivelatra ny sandry, teny amin'ny havoanan'i Rio, niaraka tamin'ireo teny filamatra hoe "mamonjy vaksinina" sy "mitambatra ho an'ny vaksininy."
Ny sarivongan'i Kristy ilay Mpanavotra an'i Rio de Janeiro dia nirehitra mba hamoahana hafatra momba ny fitoriana filazan-tsara momba ny vaksinina, izay mamporisika ny olona avy amin'ny kilometatra manodidina handohalika sy hiankohoka amina mpamonjy iray hafa.
Ny fampirantiana dia nokarakarain'ny Cristo Redactor Sanctuary sy ny masoivohon'ny dokambarotra Ogilvy Brazil.
Ny mpino sasany kosa dia tsy nankasitraka ilay hafatra ka nanameloka azy ho manevateva.
Brezila dia iray amin'ireo firenena tratry ny tsimok'aretina mafy indrindra, nahatratra 436,000 ny maty - naka ny laharana roa manerantany taorian'ny Etazonia. Ny governemanta nataon'ny filoha Jair Bolsonaro dia voatsikera mafy noho ny fitantanany ny valanaretina - hatramin'ny tsy fanamafisana ny krizy ara-pahasalamana ka hatramin'ny tsy fahitana ny vaksiny ilaina amin'ny fotoana mety.
Na izany aza, niaro ny politikany ny filoha, nilaza izy ireo fa nanampy amin'ny fitazonana ny harinkarem-pirenena hatrany. Tamin'ny herinandro lasa teo dia nanambara izy fa $ 1 miliara mahery no laniana amin'ny famokarana sy fizarana vaksinina.
Amin'izao fotoana izao, manodidina ny 33 tapitrisa ny olona, ​​na ny 15% amin'ny mponina 211 tapitrisa ao Brezila, no nahazo fatra vaksiny farafaharatsiny.